Flange fittings inoshandiswa mukumanikidza kunyorera nekuda kwekukodzera kwavo kumanikidza kwakanyanya, kuvhunduka, uye kudedera. Vanobvumidza kubatana kuri nyore pakati pombi nehubhu kana pombi, pamwe nepakati pemitsara yakaoma.
Zvekutakura tubing izvo zvakakura kupfuura inchi imwe mune yekunze dhayamita, pane nyaya nezvose zviri zviviri kusimbisa zvinobudirira uye kumisikidza. Aya majoini haangodi chete zvikwambo zvakakura, asi vashandi vanofanirwa kuzadza torque inokwana kumisikidza. Kuisirwa kunoda masisitimu dhizaini kuti vape nzvimbo inodiwa kuti vashandi vakwanise kusimudza izvo zviwoko zvikuru. Kana izvo zvainge zvisina kukwana zvakakwana, kuungana kwakaringana kwezvinhu izvi kunogona kukanganiswa nekuda kwesimba rakapera uye nekuwedzera kuneta kwevashandi vari kuyedza kuwedzera huwandu hunoshanda hwe torque. Iyo split-flange yakakodzera inogadzirisa idzi nyaya.
Flange fittings ine yakakwira kuramba kusunungura, uye inogona kuunganidzwa zvine musoro zviri nyore. Izvi zvinoshandiswa munzvimbo dzakasimba. Parizvino, anopfuura mazana manomwe akasiyana masayizi uye kumisikidzwa kwekuparadzanisa-flange fittings kunowanikwa, zvichiita kuti zvive nyore kuti imwe inogona kuwanikwa kune yakatarwa kunyorera.
Split-flange fittings inoshandisa rabha O-zvindori kusimbisa majoini uye ine yakamanikidzwa mvura. O-rin'i inogara mu groove pane iyo flange, uyezve inowirirana nechiteshi chakatsetseka pamusoro. Iyo flange inozonamirwa kuchiteshi ine ina inokwira mabhaudhi. Iwo mabhaudhi anonamatira kudzika pane anosunga eiyo flange, nokudaro achibvisa kudikanwa kwemahara mahombe ekubatanidza izvo zvikamu zvehukuru-dhayamita tubing.
Zvinhu zveSplit-Flange Fittings
Zvitatu zvinhu zvinofanirwa kuve zviripo kune kunyangwe zvakakosha zvekuparadzanisa-flange fittings. Izvi ndeizvi:
O-rin'i inokodzera kumucheto kwembambo kumeso paburi;
Maviri ekumisikidza clamp halves ane akakodzera mabhaudhi ekubatana pakati pekuparadzanisa flange gungano uye kukwikwidza pamusoro;
Musoro wakasungirirwa wakabatana zvachose, unowanzo shongedzwa kana kusunganidzwa kuhubhu.
Matipi Ekubudirira Kuisirwa Uchishandisa Split-Flange Fittings
Paunenge uchiisa split-flange fittings, yakachena uye akatsetseka mating nzvimbo inofanirwa. Zvikasadaro, majoini anodonha. Kuongorora majoini ekugocha, kukwenya uye kurovera kunogona kudzivirira matambudziko emangwana. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti nzvimbo dzakaomarara dzinozobatsirawo pakupfeka kweO-zvindori.
Mumamiriro ezvinhu apo hukama hwepedyo hwakakosha, zvinofanirwa kuve nechokwadi chekuti chikamu chimwe nechimwe chinosangana nemashiviriro akakodzera kuitira kudzivirira kuyerera kubva mukubatana kuburikidza nekubatana.
Kunyangwe magadzirirwo akagadzirwa-akapatsanurwa-flange magungano achiona fudzi repapfudzi richibuda kubva pa0.010 kusvika ku0.030 inches kupfuura pamusoro pechiso checampamp, hapana kusangana kwehafu yekukomberedza neinosangana nzvimbo inoitika.
Iko kunosungirirwa kwekubatanidza flange kwakanangana, kunyangwe torque inofanirwa kuiswa pane ese mana flange mabhaudhi. Izvi zvinobatsira kudzivirira kugadzirwa kweiyi gap iyo inogona kukonzeresa o-ring kuburitsa kana pombi yakakwira yaiswa. Zvakare, kana uchisimbisa mabhaudhi, yega yega inofanira kusimbiswa zvishoma nezvishoma uye zvakaenzana ichishandisa muchinjikwa pateni. Hazvikurudzirwi kushandisa zvipenga zvemhepo nekuda kwechinangwa ichi, sezvo kumanikidza kusingadzorwe zviri nyore uye kunogona kukonzera kusimbiswa zvakanyanya kwemabhaudhi.
Kumusoro kusvetuka kwetambo kunogona kuitika kana imwechete chete yemabhaudhi yakanyatso simbiswa. Izvi zvinogona kukonzera kubaya kweO-mhete. Kana izvi zvikaitika, kubuda pajoini kunenge kusingadzivisike. Chimwe chiitiko chinogona kuitika nekuda kweimwe chete yemabhaudhi mana akanyatso simbiswa ndiko kukotama kwemabhaudhi apo ese akasimbiswa zvizere. Izvi zvinoitika kana ma flanges akakotama pasi kudzika kudzika kusvika pachiso chechiteshi, zvichikonzera kuti mabhaudhi akotamire kunze. Kana kukombama kwemaviri flanges nemabhaudhi zvikaitika, izvi zvinogona kukonzera kuti flange isimuke kubva pabendekete, zvichikonzera majoini kubuda.
Pashure: ODM OEM otomatiki Roll Grooved Machine Vagadziri Vatengesi - Chimiro 90DE 90 ° Dhonza Elbow - DIKAI
Zvadaro: Yakakamurwa Flange